Shiinaha SAE J1772 Soo-saaraha Shiinaha ee Darbiga-ku-rakibay EV Gawaarida Gawaarida ee Warshadaha Saldhigga Guriga iyo Warshadda | Farsamada Wadajirka ah
SAE J1772 Soo-saaraha Shiinaha ee Darbiga-ku-rakibay EV Gawaarida Gawaarida ee Saldhigga Guriga
New Arrival China China EV Charging Point, EV Charging Infrastructure, Waxaan ku faannay inaan siinno alaabtayada iyo xalalka taageere kasta oo baabuur oo adduunka oo dhan leh adeegyadeena dabacsan, dhaqsaha badan iyo heerka xakamaynta tayada ugu adag oo had iyo jeer oggolaaday oo ammaanay macaamiisha.
Awood soo -saarka: 3.6kW, 7.6kW, 9.6kW, 11.5kW
Gelinta Hadda: 16A, 32A, 40A, 50A
Danab galinta: 240 ± 10%
Dhererka kabka: 18ft (25ft ikhtiyaar)
Tayada wanaagsani waxay timaaddaa bilowga; adeeggu waa kan ugu horreeya; shirkaddu waa iskaashi ”waa falsafadeena ganacsi ee meheraddeena taas oo ay si joogto ah u fiirsadaan oo ay u dabagalaan ururkeenna ee Soo-galitaanka Cusub SAE J1772 Shiinaha Soo-saaraha Wall-Mounted EV Car Charge for Home Charging Station,“ Xamaasad, Daacadnimo, Caawin Codka, Iskaashiga Keen iyo Horumarinta ”waa bartilmaameedyadayada. Waxaan halkaan ka filaynaa jaallayaal ku xeeran deegaanka!
Magaca Qaabka EVC10-03C1C EVC10-07C1C EVC10-09C1C EVC10-11C1C
Soo -galinta Hadda 16A 32A 40A 48A
Output Hadda 16A 32A 40A 48A
18ft fiilada fiilada
Xayndaabka xiisaha leh wuxuu dhexgalaa qaab dhismeedka jira waxaana si wanaagsan looga ilaaliyaa bay'adaha dibadda. Shabakad diyaarsan oo diyaarsan (LAN, 4G, ama Wi-Fi) si loogu xiro software maaraynta OCPP ee dhinac saddexaad leh. Qalabaynta dhejinta darbiga ama keligiis ee ka shaqeeya awoodda wareeggaaga si loo yareeyo kharashyada rakibidda. Xaqiijinta xaqiijinta RFID waxay u oggolaaneysaa marin u helidda darawalada EV.
LCD weyn iyo cable dheer:
4.3 ″ LCD si loo muujiyo dhammaan xogta gaariga ee saldhigga lacag -bixinta inta lagu guda jiro lacag -bixinta. Way arki kartaa xaaladda lacag -bixinta, oo ay ku jiraan hadda, danab iyo heer -kulka. Muraayaduhu waxay ku habboon yihiin sanduuqa markaa ha ka welwelin shaashadda oo soo dhacday. Fiilada 5-mitir waxay ka tagaysaa meel ku filan inta u dhexeysa gaarigaaga iyo saldhigga lacag-bixinta.
Dheelitirka iyo badbaadada:
Saldhiggu wuxuu leeyahay heer koronto oo dheelitiriya saldhigga marka aaladda korontada badan shaqeyneyso.Sidaa darteed saldhigga wuxuu ku shaqeyn karaa koronto joogto ah, isagoo ka fogaanaya nasashada iyo khataraha kale ee amniga ee ay sababtay xasilooni darrada hadda jirta.
Dhammaan badeecadahayagu waa ETL iyo CE, tayada ayaa la aamini karaa. Fiilada SAE J1772 ™ ee la jaan qaadi karta inta badan korontada iyo baabuurta korontada ku shaqeeya.
Hore: SAE J1772 Baabuurka Baabuurka Korantada Baabuurka 32A oo wata Shahaadada ETL
Xiga: Soo -saar Heerka US Charger EV ee Baabuurta Korontada leh Nooca 1
Qiimaha Baabuurka Korontada
Qodobbada Keenista Korontada Kharash
Saldhiga Guriga ee Baabuurka Korontada
ev isbarbar dhiga
ev xeedho j1772
Qiimaha Kharashka Ev
Qodobbada Lacag -bixinta Degdegga ah
Soorbox Godka IEC Type2 16A 32A 250V 480V Elec ...
EV Charging Station Wall-Mounted Charg Electric ...
Tayada Sare ee Habka 3 32A Wajiga 3phase -ka ah ...